တရုတ်နိုင်ငံ၏ တင်ပို့ကုန်စာရင်းတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး လေးမျိုးလည်း ပါဝင် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ တင်ပို့ကုန်စာရင်းတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး လေးမျိုးလည်း ပါဝင်
တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်ပြည်နယ်တွင် ပန်ဒါကြီးတစ်ကောင်က ပန်ဒါသားပေါက်တစ်ကောင်မွေးဖွါး
ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု တပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုအား ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်ကြောင်း မီဒီယာတွင် ဖော်ပြ
တရုတ်နိုင်ငံက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ဆေးများ ၊ အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမည်
တရုတ်နိုင်ငံက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ထပ်မံ ပေးပို့
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းရှိ တရုတ်ဇီဝဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Sinovac Biotech ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထုပ်ပိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဇွန် ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့နိုင်သော ကာကွယ်ဆေးထုတ်ကုန်စာရင်းတွင် ပြည်တွင်း၌ ဈေးကွက်တင်ရောင်းချခွင့် ရရှိထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးလေးမျိုးလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးလေးမျိုးအား Beijing Institute of Biological Products ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ Sinovac Life Sciences ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ CanSino Biologics Inc. နှင့် Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd. တို့မှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြေညာထားချက်အရ သိရသည်။
၎င်းကာကွယ်ဆေးများအနက် Beijing Institute of Biological Products ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် Sinovac Life Sciences ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့မှ ထုတ်လုပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးမှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်စာရင်းတွင် ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးများသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အများအပြားထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ခန့်တွင် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူ Li Xingqian က ပြောခဲ့သည်။
“ကာကွယ်ဆေးထုတ်ကုန်တွေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ဘေးကင်းစိတ်ချမှု သေချာစေဖို့နဲ့ ကုန်သွယ်ရေးထိရောက်မှု တိုးတက်စေဖို့၊ စာရင်းဝင် တရုတ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် တင်ပို့နိုင်ရေး ထုတ်ကုန် ပို့ဆောင်ရေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဈေးကွက်မျှော်မှန်းချက်များ တည်ငြိမ်စေရေးနဲ့ နိုင်ငံအားလုံး အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ရရှိနိုင်ပြီး တတ်နိုင်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးများ ထုတ်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု Li က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးများ သာတူညီမျှစွာ ရရှိရေးအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော နိုင်ငံတကာအဆိုပြုချက်ဖြစ်သည့် COVAX အစီအစဉ်နှင့် ခိုင်မာစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် တရုတ် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူများအား ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကာကွယ်ဆေးများဝယ်ယူရာ၌ ပြည်ပနိုင်ငံများအား ကူညီရန် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ဆေးများအား ကမ္ဘာ့ပြည်သူ့ကုန်စည်အဖြစ် ပြုလုပ်ရေး အထောက်အကူပြုရန် ခိုင်မာသော ဆောင်ရွက်ချက်များ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အားလုံးအတွက် ကျန်းမာသော ကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရေး မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ (Xinhua)
BEIJING, June 22 (Xinhua) — China has included four COVID-19 vaccines that have been granted conditional market approval domestically inalist of vaccine products available for export.
The four vaccines are manufactured by Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd., Sinovac Life Sciences Co., Ltd., CanSino Biologics Inc. and Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd., according to an announcement posted on the official website of the Ministry of Commerce.
Among the vaccines, two manufactured by Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. and Sinovac Life Sciences Co., Ltd. have already been listed by the World Health Organization for emergency use.
They have been administered onalarge scale in China and have been approved for use in around 100 countries, said Li Xingqian, an official with the ministry.
“To ensure the quality and safety of vaccine products and improve trade efficiency, we support listed Chinese vaccine manufacturers to export on their own, concentrate on increasing product supply, stabilize market expectations, and make vaccines available and affordable to all countries, especially the developing ones,” Li said.
He added that China will continue to support Chinese vaccine manufacturers in strengthening cooperation with COVAX, an international initiative aimed at promoting equitable access to vaccines.
The ministry will work with relevant parties to assist foreign countries in purchasing vaccines from China, take concrete action to help make the vaccinesaglobal public good, and promote the building ofaglobal community of health for all, he said. Enditem
Photo taken on Dec. 23, 2020 shows the packing line for inactivated COVID-19 vaccine of Sinovac Biotech,aChinese biopharmaceutical company, in Beijing, capital of China. (Xinhua/Zhang Yuwei)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပါက ကြက်အရှင်များ အခမဲ့ရရှိမည်ဟု မက်လုံးပေး